I-Instagram Revolution kunye nendlela yokufota eyanceda ukuvela Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Utshintsho lwe-Instagram kunye nendlela ethe yanceda ngayo ukuvela kwezithombe
Disemba 20, 2018 0 IiCententarios 1216
Incwadi kaChase Jarvis ethi "Eyona Khamera igqwesileyo yile ikunye nawe" ibonisa iifoto azithathileyo esebenzisa i-iPhone yakhe kuphela. Eyona nto ibaluleke kakhulu, incwadi ibonisa ukuba nokuba yeyiphi na ikhamera oyisebenzisayo, ukuba nje uthwebula imifanekiso oyifunayo ngale ndlela ufuna ngayo, unokwenza ifoto elungileyo. Kuko konke oku, oku kuthetha la Uhlaziyo lwe-Instagram.
Umbono kaJarvis, nangona kunjalo, ayisiyonto yabaninzi abafoti. Iifoto zemveli, ngakumbi, azinamdla kangako kwingcamango yokusebenzisa iifowuni zekhamera ukuthatha imifanekiso. Uninzi lwazo lukholelwa ukuba iifowuni zekhamera zibujongela phantsi ubuchule befoto. Uninzi luthi lususa inyani yokuthatha iifoto, kuba konke okufuneka ukwenze kukucofa iqhosha kwaye ufumane umfanekiso owufunayo. Abanye bade babize iifowuni zekhamera njengendlela yokuphazamisa iteknoloji. Eli linenombolo yabathandi beefoto ababona isicelo sokwabelana ngesithombe Instagram.
Kususela kokuqaliswa kwayo kwi2010, I-Instagram ibe yimpumelelo enkulu. Abantu bathanda izinto ezinokusetyenziswa lula kunye nenyaniso yokuba banokuthatha iifoto kwaye bazenze zibe nomtsalane ngakumbi ngoncedo lweefilitha.
Nokuba zithini na iifoto nge-Instagram, ayinakuphikwa ukuba isicelo sokwabelana ngefoto sibe negalelo elikhulu kwindalo yokufota.
Unxibelelwano lwenethiwekhi yoluntu
Ngokuthandwa kwe-Instagram, Ngoku kunokwenzeka ukuba wabelane ngeefoto ngendlela elula. Unokwabelana ngokukhawuleza ngeefoto zakho ze-Instagram ku-Facebook naku-Twitter.
Eli nqaku liya kunika iifoto zakho ukufikelela okukhulu, njengabahlobo be-Facebook kunye abalandeli I-Twitter inokwabelana ngeefoto ngonxibelelwano lwabo. Kwimizuzu nje embalwa, amakhulu (nkqu amawaka) abantu bayayibona imifanekiso yabo. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo le yayiyimvukelo ye-Instagram.
Eyona ndlela ilula yokuhlela iifoto
Iifilitha zayo eziphefumlelweyo ze-retro ekulula ukuzilawula, unokuzihlela ngokulula iifoto zakho. Akukho mfuneko yokusebenzisa esinye isicelo, kuba iifayile Zingaphakathi kwi-Instagram. Oku akunakulunga kubafoti bezendabuko okanye abaziingcali, kodwa abasebenzisi be-Instagram bayayithanda into yokuba ngokucinezela iqhosha, banokuguqula imifanekiso yabo yombala ibe mnyama nomhlophe, ngokwahlukileyo. Ngalezi zihluzo zexeshana, unokuyila kwangoko umfanekiso ofuna abantu bawubone.
Abanye abafoti abaziingcali abafuni ukusebenzisa izihluzi kuba bakholelwa ukuba oku kuyabathintela ubuchule. Iifoto ezininzi zithi nokuba zineefilitha, i-Instagram ngandlela thile izukisa isibhamu esibi. Nangona kunjalo, ezi zinkcazo azikhathazi abasebenzisi be-Instagram, kuba bafumanisa ukuba iifoto zokucoca ziyonwabisa kwaye ziluncedo.
Iikhamera zemveli kunye nee-DSLR zinzima. Iifowuni zekhamera, ezizezona ndlela ziphambili ze thatha iifoto ze-Instagram, zilula kwaye kulula ukuthwala. Akukho zilensi zide kunye neesayidi zokunxiba. Ngapha koko, abaliqela beefotojournalists bade bajonge ii-iPhones zabo njengeyona ndlela ibhetele kuneekhamera zabo ze-SLR, ngakumbi xa kuvela iziganeko ezingalindelekanga. Kuba zincinci kwaye zinokugcinwa epokothweni yakho, Iifowuni kunye nezinye iifowuni zekhamera zinokunxiba ngobuchule Kwaye oku kube kukuvuselelwa kwe-Instagram.
Nge-Instagram, ukufota kuye kwaba lula.Umaqonga, ungazithatha iifoto, uzihlele kwaye emva koko wabelane ngemizuzu. Abantu ngoku banenye indawo enokubiza iikhamera ezibizayo kunye neparaphernalia yokufota.
Ukuqukumbela, kukhuselekile ukuba uthi uguquko lwe-Instagram lube yimpumelelo ekwabelaneni ngeefoto ezifanelekileyo nabantu abaninzi. Iifoto zobungcali zinokukhetha ukuyamkela okanye ayiyi, kodwa inyani kukuba i-Instagram iguqule ilizwe lokufota kwaye iya kuqhubeka nokwenza njalo.
1 Unxibelelwano lwenethiwekhi yoluntu
2 Eyona ndlela ilula yokuhlela iifoto
3 Indlela esebenzayo
4 Zonke zizodwa
Disemba 20, 2018
Iindlela zokufumana abalandeli abaninzi kwi-Instagram
Ungayikhuthaza njani iimveliso kwi-Instagram